Japana : Tsy Firaharahiana iombonana Nitsenana ireo Taratasin’i Panama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2016 12:39 GMT
Navoakan'ny ICIJ tamin'ny 8 May, ny anaran'ireo fikambanana sy olona 250 fara-fahakeliny voasoratra ao amin'ireo Taratasin'i Panama. Sary avy amin'ny haba-tranonkalan'ny Panama Papers
Ny 9 May, rehefa navoakan'ny Fikambanana Iraisam-pirenen'ny Mpanao Gazety Mpanao Fanadihadiana (ICIJ) nandritra ny fiporitsahan'ireo antontan-taratasy fantatra amin'ny anarana hoe Taratasin'i Panama ny anaran'ireo fikambanana manodidina ny 240.000 sy ireo manana petra-bola ao aminy, dia nahitana anarana Japoney manodidina ny 230-240 tamin'ireo lisitranà fikambanana 20.
Isan'ny olom-pirenena japoney voatanisa ao amin'ilay taratasy tafaporitsaka ny tompona orinasa mpanao zava-pisotro UCC, ilay fianakaviana namorona ny SECOM, ny orinasa japoney tsy miankina tranainy indrindra misahana ny fiarovana, sy i Mikitani Hiroshi, Filoha Tale Jeneraly sady mpiara-manangana ny Rakuten, goavana amin'ny varotra an-tserasera japoney
Na izany aza, misy ihany ny fampitahana kely tsy azo tsinontsinoavina amin'ny fandrakofana sy ny fanadihadian'ny haino aman-jery momba ireo Taratasin'i Panama tany Japana hatramin'izao na ny antony ahafahan'ireo olona ambony, ireo izay voalaza fa mifandray amin'ny governemanta, mandefa vola any amin'ireo paradisan-ketra any ivelany. Tsy ny governemanta mihitsy no ho liana amin'ny fanadihadiana lalina ireo tsiambaratelo niporitsaka. Izany, na eo aza ny fitomboan'ny tsy fitovian'ny fidiram-bola sy ny fitombon'ny tahan'ny fahantrana any Japana.
Nisy tantara ratsy hafa iray nateraky ny resa-bola nanakona ny sain'ny olona tsy ho amin'ny vaovaon'ireo Taatasin'i Panama farany teo — filazàna fa mety nanao tsolotra ny komity Olaimpika Japoney mba ahazoana ny vato ampy amin'ny fampiantranoana ny lalao 2020 any Tokyo. Ny mpanao dokam-barotra goavana Dentsu no voalaza fa tafiditra ao anatin'ny fandoavana ny vola
Talohan'ny naha-lohateny vaventy ny resaka kolikoly Olaimpika, ireo gazety toy ny Shuukan Gendai sy ny Nikkan Gendai no tena haino aman-jery mpitsikera indrindra any Japana tamin'ny namoaboasany ny famoahana ireo Taratasin'i Panama, amin'ny ankapobeny dia lazainy fa ” olo-malaza faran'izay manankarena mandositra hetra” ireo olona voasoratra ao amin'ilay antontan-taratasy.
Asehon'ity bitsika manaraka ity ny lisitry ny lohahevitry ny gazety mpiseho isan-kerinandro Shukan Gendai tamin'ny fanontana ny 21 May 2016 (navoaka ny 9 May) ; anjakan'ireo Taratasin'i Panama ny serasera :
Fandikàna miaraka ny bitsika sy ny pejy voalohan'ny Shukan Gendai : FANADIHADIANA MANOKANA GOAVANA : INDRO NY LISITRY NY MPANANKAREM-BE MANDOSITRA HETRA ! navoakan'ny lisitry ny Taratasin'i Panama ihany nony farany ! ny mpanangana ny SECOM, ny talen'ny UCC sy ireo hafa mandefa ny fananany any ivelany mba hialàna amin'ny hetra.
Nohamafisin'ny gazety mpiseho isan'andro Nikkan Gendai ny herin'ireo voasoratra anarana ao amin'ny Taratasin'i Panama. Navoakany mifanila tao amin'ny Twitter ny lisitry ny fikambanana sy ny olon-tsotra voasoratra anarana tao amin'ilay antotan-taratasy tafaporitsaka ahitàna ny sarin'ny Rakuten TALE JENERALIN'NY Mikitani Hiroshi :
Bitsik'i Nikkan Gendai : Henoy izay tsy maintsy ho lazain'ny tale jeneraly sy ireo mpanangana orinasa voasoratra anarana ao amin'ny Taratasin'i Panama : https://t.co/tkiznrf7z0 #NikkanGendai Digital
Bitsik'i @pacemken: Raha sady efa mitsentsitra ny soa avy amin'ny vahoaka Japoney ireo mpanankarena sangany toa an-dry Mikitani Hiroshi, dia mbola mifidy izay fomba tsy handoavana hetra koa izy ireo. Aza mampiasa ny Rakuten, aleo mampiasa ny Amazon.
Amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona ho an'ny Fiarahamiasa sy Fampandrosoana ara-toekarena (OECD), dia ny ao Japana no somary ambony ny tsy fitovian'ny fidirambola ( na dia misy aza ny adihevitra momba ny fitomboana na fidinan'ny tsy fitoviana ).
Na izany aza ny zava-misy, tsy anton-dresaka nasionaly amin'izao fotoana izao amin'ny ankapobeny ny fanadihadiana na mandoa na tsia ny anjara sahaza azy ireo Japone mpanankarena indrindra.
Namafisin'ny Sankei Shimbun, iray amin'ireo gazety lehibe mpiseho isan'andro, tao amina bitsika iray fa vitsy hatreto ireo anarana Japone voasoratra izay aseho eran'izao tontolo izao ao amin'ireo Taratasin'i Panama :
Lohatenin'ny kisary : Adiresin'olontsotra, vondrona voatanisa ao amin'ny Taratasin'i Panama ( isaky ny firenena)
Ireo firenena ao amin'ny kisary, avy any ankavia miankavanana : Shina, Hong Kong, Etazonia, Singapore, Rosia, Angletera, Soisa, Japana
Loharanon'ny Kisary : ICIJ
Bitsika : anarana Shinoa 28.000 no aseho ao anatin'ny Taratasin'i Panama. ” Tambajotran'ny tsy fandoavan-ketra” naseho amin'ny antsipirihany mazava.
Andro vitsivitsy taorian'ny nahitana ireo anarana Japoney tao amin'ireo Taratasin'i Panama dia nisy fitarainana niombonana tao amin'ny haino aman-jery fa toa tsy misy ôfisialy firy liana amin'ny fanadihadiana na tsia ireo “mpanefoefo” mandositra hetra any Japana.
Ohatra, navoakan'i Nikkan Gendai :
Lohateny lehiben'ny sary amin'ny sisiny havanana : toy ny hoe tsy mahaliana ny governemanta Abe sy ny biraon'ny famorian-ketra [ny fanadihadiana ny fandosirana hetra].
Ny lohateny amin'ny sary eny ambony indrindra : Raha izao no mitohy, dia ataon'izao tontolo izao fihomehezana i Japana.
Lohateny kely ambanin'ny sary : Mety saropady ihany ny fanadihadiana ny Taratasin'i Panama.
Ny bitsik'i @Trapelus : Ho fihomehezan'izao tontolo izao isika : ” toy ny hoe tsy mahaliana ny governemanta Abe sy ny biraon'ny famorian-ketra [ny fanadihadiana ny fandosirana hetra]. Mety saropady ihany ny fanadihadiana ny Taratasin'i Panama.” Raha toa ka tsy tezitra ny governemanta ka hijanona hangina, dia ny vahoaka Japoney indray no hihomehy amin'ny farany (ho tompon'ny teny farany).
Araka ny lahatsoratra navoakan'ny Nikkan Gendai tamin'ny 11 May, dia angamba noho ireo anarana sasany ao anaty lisitra nisy fifandraisana tamin'ny governemanta no anton'io fisalasalàna io. Amafisin'ny gazety fa ny zaobavin'ny Kato Katsunobu, mpikambana zandriny indrindra ao amin'ny kabinetran'ny Praiminisitra Abe Shinzo, no talen'ny orinasa Japone iray voasoratra ao amin'ny Taratasin'i Panama.
Taterin'ny Nikkan Gendai ao amin'io lahatsoratra io ny fanambaran'i Takatori Shuichi, parlemantera minisitra lefitry ny fahasalamana, ny asa sy ny fanampiana ara-tsosialy manao hoe :
Nolazaina fotsiny tao amin'ny haino aman-jery ireo anarana sasany. Tsy mihevitra ny hanao fanadihadiana manokana momba izay niseho tamin'izany fotoana izany izahay amin'izao fotoana izao.
Nampahatsiahivin'ny Sankei News fa “vaovao efa ela” ny fandosirana hetra. Izao no vakin'ny lahatsoratra manokana tamin'ny 16 May :
Bitsika, mitanisa ny lahatsoratry ny Sankei : ny fiantraikan'ireo Taratasin'i Panama : ” vaovao efa ela ny fandosirana hetra,” hoy ny eson'ireo manampahaizana momba ny vola. [ Misy fomba marobe tsy voatanisa] ny famotsiam-bola sy ny fandosirana hetra.
Famintinana ny lahatsoratry ny Sankei : ” Vaovao efa ela ny fandosirana hetra.” Fony noterena hametra-pialàna ny Praiminisitr'i Islandy, dia efa niparitaka [manerantany] ny paradisan-ketra. Raha toa ka mbola manako manerantany ny vokatry ny Taratasin'i Panama, dia hoy ny manampahaizana iray momba ny vola : ” tsy zava-baovao mihitsy izany.”
Misy mihevitra fa afaka manao zavatra bebe kokoa i Japana hiatrehana ny olan'ny paradisan-ketra sy ny fandosirana hetra. Faranan'ny Sankei amin'ny fampitandremana nataon'ny olona iray hafa miasa amin'ny sehatra ara-bola Japone ny lahatsorany :
Misy milaza fa tsy ampy ny ezaka ataon'i Japana amin'ny ady amin'ny fandosirana hetra. Hoy ilay lehibe fahiny taminà orinasa iraisam-pirenena mpampiasa vola : ” efa ela i Japana no nitsahatra tsy ho ivon'ny raharaham-bola iraisam-pirenena ( izay misarika ny renivola Japone). Tena heveriko fa tokony hanadihady ny fomba rehetra izay nahatonga ny renivola hiala tao Japana hiampita ranomasina.”